WattOS: chiedza, chakasimba uye nezvese zvinhu distro | Linux Vakapindwa muropa
WattOS isingaremi, dombo yakasimba, generic kugovera, ndiko kuti, iwe unogona kuishandisa chero chinhu, usinga tarise kune imwe niche senge zvimwe zvekuparadzirwa kweLinux zvatakaongorora pane webhusaiti yedu. Naizvozvo, huzivi hwakagadzirwa neiyi sisitimu yekushandisa ndeyekupa yakareruka kugovera pasina kumbosiya zvimwe zvinhu.
WattOS inobvumira simba rakanaka kuchengetedza, uye inogona kuiswa pane yekare Hardware nekuda kwekureruka kwayo (haina kudya zviwanikwa zvakawandisa). Zvese zvekutenda nebasa rakaitwa nevagadziri maringe base, iri mune ino Ubuntu. Iwe unotoziva kuti neWattOS 8 vakasarudza kusiya Canonical distro kuti vaende kunotsamira paDebian, asi ikozvino vadzoka neshanduro 9 kuti vashandise iyo Ubuntu kugovera sereferenzi.
Kana nekuda kwechimwe chikonzero chisingaratidzike sechiedza zvakakwana, pane imwe shanduro diki inonzi Microwatt, iyo yaivewo neshanduko kubva kuPekWM kana openbox ku i3 hwindo maneja. Iwe unotoziva kuti i3 ndeimwe yevasina kuremara mamaneja emawindo zvinoenderana netiling filosofi (iyo inoronga windows mumataira uye haivapindire, kutora nzvimbo yese padesktop), chimwe chinhu icho kune vamwe chisina kana kugadzikana uye kune vamwe vashandisi ndiyo inoshanda zvakanyanya ... nyaya yekuravira.
Kudzokera kuWattOS, ikozvino mune yayo nyowani vhezheni yegumi tinogona kuwana nharaunda ye LXDE tafura, inonyanya kufarirwa uye yakaoma kupfuura i3. Uye zvakare, iyo Linux kernel yakagadziridzwa kune imwe yazvino vhezheni, pasina kukanganwa mapakeji ayo anosanganisirwa nekutadza uye pre-akaiswa pane ino system, ayo akagadziridzwa zvakare. Pakati peiyo repertoire yemapakeji pane mapakeji ekuvhara zvese zvinodikanwa, pamwe neyakajeka software yekuvandudza manejimendi emagetsi mumalaptop.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Kugoverwa » WattOS: isina kuremara, yakasimba, yese-chinangwa distro
Tony Manero akadaro
Ini ndichangoisa uye ndinonyatsoda desktop: yakapusa uye inoshanda. Chandisingazive chaizvo maitiro ekuisa mamwe mapurogiramu anobatsira. Ini ndakangokwanisa kuisa gparted.
Pindura Tony Manero
Jacael marvaez akadaro
Kusvika nhasi, Linux ndiyo yakanakisa muOS Ndine makore makumi maviri nemashanu ekushandisa anenge ese, uye kune akawanda andisina kuverenga. Asi ini ndinokuvimbisa iwe kuti Windows yatove yakapa chinhu chete icho chakakwanisa kubvuta, mune zvakanyanyisa zviitiko zvinoshandiswa, asi neLinux Mint, kunyanya yakagadziridzwa 25, haufanire kuda chero chinhu kubva ku showy asi isingashandi. Mahwindo. uye isingasviki masere kusvika gumi magadzirirwo asingachashandi anononoka kune avo vedu vanoda kumhanyisa basa. Mune Razvino Sayenzi Inoshandisa LINUX .- (r)
Pindura kuna Jacael Marvaez
Ronald C akadaro
kuti desktop ndeipi
Pindura Ronald Cl
Yakanyanya kufanana neLubuntu (iri nyore nekuda kweiyo LXDE desktop uye nemapurogiramu mazhinji anowanikwa nekuti akavakirwa paUbuntu).
Zvakanakira zvandakaona zve WattOS pamusoro peLubuntu:
- Inokodzera CD.
- Kuderera kwesimba kushandiswa.
- Zvishoma zvakaderera kushandisa RAM.
- Haisi yepamutemo.
- Iine zvimwe zvipenga muchirongwa chehupenyu.